Vaive Mutungamiri weNyika VaRobert Mugabe Vanoti Vakabviswa Pachigaro neChisimba
Vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe
Vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe vakati havacherechedze hutungamiri hwaVaEmmerson Mnangagwa, avo vanoti vakapinda pachigaro nechisimba vachibatsirwa nemauto, kana kuti coup de-tat.
Vachitaura kuvatori venhau nemusi weChina kumba kwavo ku Blue Roof kuBorrowdale, muHarare, VaMugabe vakati vanoshamiswa nezvakaitwa naVaMnangagwa zvekuvabvisa pachigaro, vachiti havana kumbobvira vazvifungira kuti munhu avakarera pamwe nekupinza muhurumende, uye ane hupenyu hwavakaponesa nekushandira zvakasimba vari mujeri kuti asaurayiwa, nerimwe zuva achavapandukira.
VaMugabe vakati VaMnangagwa havaimbokwanisa kunge vakaenda pachigaro chekutungamira nyika vasina rubatsiro rwemauto, ayo vanoti akavabatsira.
Vakati mauto akave nechokwadi chekuti mamwe mapazi ehurumende akanyaradzwa zvachose, vachiti vamwe vasori vesangano re Central Intelligence Organization (CIO) vakatsakatika paipidigurwa hurumende yavo nanhasi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi.
Vakaenderera mberi vachiti zvakaitwa naVaMnangagwa izvi zvonoshoresa, vakati zvinofanirwa kubviswa sezvo vanhu vemunyika vasingakodzeri kuve mazviri.
Vakati Zimbabwe haikodzeri kuve nazvo, vachiti inofanirwa kuve nyika inotevera bumbiro remitemo, uye nyika inofanirwa kuzviburitsa kubva mazviri.
VaMugabe vakatiwo, hongu panogona kunge paine zvinetswa pano nepapo, asi pamusoro pezvose, mutemo unofanirwa kuremekedzwa.
VaMugabe vakatiwo vakagadzirira kutaurirana naVaMnangagwa kana zvikarongwa nemazvo, UYE Vakachemachemawo kuti munyika hamuchina hutongo hwejekerere.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaJoy Mabenge vanoti chakakosha panyaya iyi ndechekuti nyika yave kutangawo kunzwa divi raVaMugabe kubva pavabviswa pachigaro gore rapera.
VaMabenge vanotiwo chimwe chiripo ndechekuti vachingori VaMugabe venharo vavanoziva vaya, hapana chashanduka.
"Asi pakanyanya kukosha VaZulu ndepekuti mashoko acho ari kubuda mumukanwa maVaMugabe anoratidza kuti vachingori VaMugabe vatinoziva kubva makare. Mudhara wenharo, mudhara anongozviona sekuti ndiye akakosha badzi pasi pano," VaMabenge vanodaro.